Kedu ihe bụ Swag? Ọ bara uru itinye ego ahịa ahịa? | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ogologo oge, ị maara ihe swag bụ. Ọ dịtụla mgbe ị nọ na-eche banyere ebe okwu a si malite? A na-akpọ Swag n'ezie maka ihe ezuru ohi ma ọ bụ ngwongwo ejiri na 1800s. Usoro ahụ akpa O yikarịrị ka ọ bụ isi iyi nke slang… ị tinyere ngwongwo gị niile n'ime akpa okirikiri wee gbanarị gị swag. Ụlọ ọrụ na-edekọ nakweere okwu ahụ na mmalite 2000s mgbe ha na-etinye ọnụ otu akpa onyinye na ihe eji eme ihe yana mwepụta album ọhụrụ… na-atụ anya na ndị DJ ga-etinyekwu uche na onye na-ese ihe ha.
Usoro agbanwebeghị nke ukwuu… n'èzí nke eziokwu ahụ bụ na ịkwesighi ịkwatu onye ọ bụla ọzọ. Gaa na ika n'isi ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ na ogbako, na ị na-ezutekarị ụfọdụ free takeaways… gị swag. N'ezie, ụfọdụ swag dị egwu, dị ọnụ ala, ma na-achọta ụzọ ya n'ime ụlọ nkwari akụ. Ihe mkpuchi ọzọ dị mma.
Otu n'ime ihe swag ọkacha mmasị m bụ draịva USB nke ama ama n'ụwa Ụlọ oriri na ọṅụṅụ St. Elmo n'ime ogbe ndịda Indianapolis. Mgbe m na-ekerịta n'ịntanetị gbasara azụmahịa ole na ole na njem ezinụlọ m ga-anọ ebe ahụ, ndị otu ha na-ere ahịa tụrụ m n'anya na akpa swag jupụtara na ngwa nri omenala ha, sauces, na obere mkpuru osisi a. Enwere m ya ọdụ (uzuzu uzuzu) na tebụl m, ọ na-ewetakwa obi ụtọ na-echeta ụlọ oriri na ọṅụṅụ… na mmanya mmanya shrimp dị ịtụnanya.
Swag ọ na-arụ ọrụ?
Ọfọn, nke ahụ bụ $ 24 ijeri ajụjụ, nri? Azịza ya ziri ezi bụ… mgbe ụfọdụ. Ozizi dị n'azụ swag bụ ọtụtụ akụkụ:
Brand - Site n'ichepụta onyinye efu, ị nwere ike wulite mmata ika.
na ebe nchekwa - Site n'inye ihe anụ ahụ, onye na-atụ anya ma ọ bụ onye ahịa ga-eji ihe na-echetara ha gị, ika gị, ngwaahịa gị, ma ọ bụ ọrụ gị.
Mgbapụta – Mgbe ọ bụla ị na-enye mmadụ onyinye, ọbụna obere, e nwere e pụta ụwa mmetụta mmadụ na anyị ga-achọ inyeghachi onye ahụ.
Ndị folks na Sales Hacker mere ule A/B ebe ha gbakwunyere swag na onyinye… na ha tụrụ ha n'anya na nsonaazụ ya:
Otu ndị natara swag ji okpukpu atọ karịa ka ha ga-edekọ nzukọ, na Outreach hụrụ mmụba 2.42x na uru ohere maka atụmanya n'ime otu ule.
Onwe m, enwere m ekele maka ahaziri onwe ya yana ọnụ swag karịa ihe efu dị ọnụ ala nke ga-ejupụta ebe mkpofu ahịhịa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ baara onye nnata gị uru n'ụzọ ụfọdụ. E nwere ndị ọzọ, n'ezie. Anaghị m eji draịva USB Cocktail Shrimp… mana ọ dị mma nke ukwuu na m na-edobe ya na tebụl m.
Ebee ka ị nwere ike chepụta, ịtụ ma jikwaa Swag gị?
Ọ na-ewekarị oge iji chepụta swag, kwupụta ya, na ịtụ ya nke ọma iji belata ọnụ ahịa ya. Weebụ ahụ toro na saịtị dị iche iche ebe ị nwere ike site na ọnụ ala, ihe ojoo nke ị maghị maka ịdị mma ya. Agbalịrị m ruo ọtụtụ afọ ka m wee nwee ezigbo swag, ọ na-ekpokwa ọkụ ma ọ bụ oyi.
Swag.com bụ saịtị wuru kpọmkwem maka ịzụrụ swag dị elu maka ika gị. Ha enyochala ma nwalee ọtụtụ puku ngwaahịa - wee kpachie ngwa ahịa ha na 5% kacha elu nke ngwaahịa ndị na-ewu ewu, na-ewu ewu ma na-ahapụ echiche. Ha ewepụtala ahụmịhe ịzụrụ swag niile. Ị nwere ike ịchọta ihe ị na-achọ n'ụzọ dị mfe, bulite imewe gị, ịkwa emo ngwaahịa gị, na ndenye ọpụpụ n'ime ihe dị ka sekọnd.
Swag.com nwere ngwaahịa maka ụlọ, ụlọ ọrụ, uwe, ihe ọṅụṅụ, akpa, teknụzụ, ịdị mma, na ha nwere ọtụtụ ụdị ama ama ịhọrọ. Ị nwere ike ijikwa kaboodu Swag gị n'ịntanetị:
Ewezuga ntụgharị na-eduga n'ọkwa, enwere ike iji swag kwụọ ndị ahịa gị kacha mma ụgwọ, mekọrịta nzukọ n'ịntanetị na ọbụna soro ndị ọrụ gị dịpụrụ adịpụ soro.
Chepụta ụfọdụ nnukwu Swag Ugbu a!
Ngosi: Abụ m mmekọ Swag.com na m na-eji njikọ dị n'isiokwu a.
Tags: na-arụ ọrụ ngwa ngwanyepụịtụ swagnnyefemmanya shrimpst elmosswagswag.comeriri mbanye